Himalaya Dainik » के तपाईं सुन्दर देखिन चाहानुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस ‘कोरियन मेकअप’
के तपाईं सुन्दर देखिन चाहानुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस ‘कोरियन मेकअप’
हजारौं वर्षदेखि आकर्षक र सुन्दर देखिनको लागि मेकअपको प्रयोग गर्दै आएका छन् । मेकअपको यस हरपल परिवर्तन हुँदै गएको दुनियाँमा कोरियाली मेकअपले प्रवेश भएको छ । विश्वभरमा कोरियाली मेकअपको ट्रेन्ड बढीरहेको छ ।
बितेका केही वर्षमा कोरियाली पप संगीत, कोरियाली फिल्म र कोरियाली टिभीशोहरु पश्चिमा देशहरु सहित विश्वका अन्य देशमा लोकप्रिय हुँदै छन् भने अहिले पश्चिमा देशका युवाहरु पनि कोरियाली मेकअप ट्रेन्डप्रति आकषिर्त भएका छन् जसलाई ‘के-ब्युटी’ भनिन्छ ।
लोकप्रिय कोरियाली ब्याण्ड बिटिएसका सात पुरुष सदस्यका साथै कैयौं कोरियाली सेलिब्रेटीहरु आफ्नो एक सिग्नेचर लुक्सको लागि चिनिन्छन् ।
पछिल्लो केही महिनादेखि ‘के-ब्युटी’को चलन पश्चिमा देशमा पनि देखिन थालिएको छ । रिटेल शोधकर्ता मिन्टेलको रिपोर्टअनुसार सन् २०१७ मा कोरियाली ब्युटी इन्डष्ट्रीको मुल्य लगभग १३ अर्ब डलर छ ।
मेरी क्लेयरकी डिजिटल ब्युटी एडिटर केटी थोमस भन्छिन्, ‘कोरियाली मेकअपप्रति बढ्दो आकर्षणको मुख्य कारण यसको नयाँपन हो । कोरियाली ब्युटी इन्डस्ट्री अरु देश भन्दा १०-१२ वर्ष अगाडि चल्छ ।
इन्स्टग्राम र ब्युटी ब्लगको मद्धतले हामी यसको कदमसँग कदम मिलाउने कोसिस गरिरहेको छौं ।’
कुनै पनि मेकअप लगाउन भन्दा पहिलो कोरियालीहरु छालाको धेरै ख्याल राख्छन् । उनीहरुले छाला राम्रो होस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्छन्, जसले दाग धब्बा लुकाउनको लागि फाउन्डेसन वा अन्य मेकअप सामानको आवश्यकता नपरोस् ।
थोमस भन्छिन्, ‘कोरियाली सँस्कृतिमा मानिसहरुको मनमा यो कुरा सानो उमेरमै राखिदिन्छ कि उनीहरुले आफ्नो छालाको ख्याल राख्नुपर्छ ।’ भने कोरियाको मेकअपलाई लिएर धेरै किसिमका शोध गरिन्छ किनभने यँहा प्रतिस्पर्धा धेरै छ ।
आम रुपमा मानिसहरु मेकअप भन्दा पहिले तीन चरणको प्रयोग गर्छन् जसमा क्लिन्जर, टोनर र मोइस्चराइजर समावेश हुन्छ तर कोरियाली मानिसहरुले मेकअप भन्दा पहिले ७ देखि १२ चरणको प्रयोग गर्छन् ।
हरेक मानिस अरुभन्दा राम्रो बन्ने कोसिसमा लागेका छन् । लण्डन स्थित ‘के-ब्युटी’ बारकी संस्थापक केरेन होन्ग भन्छिन्, ‘कोरियाली ब्युटी उद्योग नयाँ प्रयोगलाई लिएर सँधै अगाडि रहन्छ । आफ्नो नयाँ सामग्रीलाई लिएर शुत्रसम्म उनीहरु सँधै नयाँ प्रयोग गर्छन् जसलाई पश्चिमी देश कहिल्यै अपनाउन चाहँदैनन् ।’
यसैकारण कोरियाली साम्रगीको माग बढ्दै गएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘कोरियालीहरुले छालालाई नरम बनाउनको कागि शंखेकिराको प्रोटिनको प्रयोग गर्छन् । छालामा तेलको कमीलाई कम गर्नको लागि मौरीको चाकाको प्रयोग पनि गरिन्छ ।’
प्रकाशित मिति ११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०५:४२